Akụkọ - Ụlọ ọrụ ahụ na-eduzi nkuzi na ọzụzụ ahụike ọrụ
Ihe mmetụta ugbu a
Ihe mmetụta AC ugbu a
Ihe mmetụta DC ugbu a
Ihe mmetụta voltaji AC
Sensọ voltaji DC
Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ
Mepee Mmetụta Ụlọ Nzukọ Loop ugbu a sensọ
Mmetụta Mgbapụta Ụlọ Nzukọ Emechiri emechi ugbu a
Ihe mmetụta dijitalụ
Sensọ Conditioner Signal
Ihe mmetụta ugboro ugboro
Ụlọ ọrụ ahụ na-eduzi nkuzi na ọzụzụ ahụike ọrụ
Iji kwalite mmata nke ndị ọrụ banyere ahụike ahụike yana ịkwalite ihe ọmụma gbasara mgbochi ọrịa ọrụ, dịka usoro ọzụzụ nchekwa nchekwa 2020 si dị, ụlọ ọrụ ahụ weputara isiokwu ahụike ọrụ yana isiokwu nke "Ịlekọta ahụike ndị ọrụ na inyere China ahụike aka" ụlọ nzukọ 312 n'ụtụtụ Disemba 9th. Ndị otu kọmiti nchekwa ụlọ ọrụ, ndị otu ụlọ ọrụ nchekwa, ndị isi ọkwa etiti, ndị isi ụlọ ọrụ, ndị nnata ihe metụtara na ụfọdụ ndị ọrụ ọhụrụ sonyere na ọzụzụ ahụ.
Ụlọ ọrụ ọzụzụ a kpọrọ onye nkụzi Ling Yujing si Sichuan Station nke Safety and Health Education Center ka ọ nye nkuzi na saịtị. N'oge ọzụzụ ahụ, Onye Ozizi Ling jiri ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto, ezigbo ikpe na vidiyo na-ekwusa ozi ọma nke ọma na nke ọma na ọdịnaya nke akụkụ atọ: Nke mbụ, ihe ọmụma nke nnapụta mberede, gụnyere ihe ọmụma nke CPR na saịtị ahụ na-emegharị obi obi, ụbụrụ ụbụrụ (ụbụrụ ụbụrụ). ọrịa strok), na akwụkwụ. Ụzọ enyemaka mbụ maka ọrịa, infarction myocardial, usoro hemostasis nkịtị na ụzọ enyemaka mbụ Heimlich; nke abụọ bụ iwebata ụzọ ndụ dị mma, gụnyere nri kwesịrị ekwesị, mmega ahụ kwesịrị ekwesị, ịkwụsị ise siga na mmanya, nguzozi nke uche, ụra zuru oke, wdg; Nke atọ bụ ịkọwa mgbochi na mmelite nke ọrịa ndị na-adịghị ala ala na-emekarị, gụnyere mgbochi na ọgwụgwọ ọbara mgbali elu, ubu oyi kpọnwụrụ, spondylosis cervical, wdg, na iwebata ihe ọmụma nlekọta ahụike nke isi ihe meridian. N'ebe ọzụzụ ahụ, Onye nkuzi Ling Yujing na ndị na-azụ ọzụzụ na-emekọrịta ihe na-arụsi ọrụ ike ma mee ngosi ngosi ndụ, nke natara nzaghachi na-ekpo ọkụ site n'aka onye ọ bụla. Ọmụmụ ahụike ọrụ nke otu awa na ọkara na-enwe ụbara ọdịnaya, nwere foto na ederede bara ụba, ebe mmụta na-eme ka ume na-awụ akpata oyi na nzaghachi nye ajụjụ site n'oge ruo n'oge. Site na ọzụzụ a, ọ bụghị naanị ihe ọmụma ahụike ọrụ nke ndị na-azụ ọzụzụ ka mma, kamakwa onye ọ bụla ghọtara na ha kwesịrị itinyekwu uche na nsogbu ahụike nke onwe ha ma chebe "isi obodo mgbanwe".
Iji mepụta ahụike, nchekwa, nkwekọrịta na gburugburu ebe ọrụ na-adịgide adịgide, yana ichebe ahụike nke ndị ọrụ bụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze nke ụlọ ọrụ. Ọzụzụ na ọzụzụ ahụike nke ụlọ ọrụ ahụ ekerewo òkè dị mma n'ịkwalite mmata nchekwa nke ndị ọrụ, hụ na ahụike anụ ahụ na nke uche, na igbochi ọrịa ọrụ nke ọma.
Oge nzipu: Mee-01-2020
Ọ dịghị 98 Youxian East Road, Youxian District, Mianyang 621000, China
Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ, Oriri ike dị ala Dc ihe mmetụta ugbu a, Mmetụta Ụlọ Nzukọ Ac ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta dị ugbu a Ac dị elu, Ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a, Ihe mmetụta voltaji ugbu a,